Nezvedu - Beijing Allwin Pack Co, Ltd.
Allwin Pack iri muBeijing yeChina, inova yakazara bhizinesi rekutakura chikafu, yakasarudzika mualuminium foil mudziyo, midziyo yepurasitiki, dhizaini dhizaini uye kuvandudza, michina michina R&D, kushambadzira uye vatengi seimwe yekambani Yakabatanidzwa. Nzvimbo yekugadzira yeAllwin Pack iri muHebei, Tianjin, Shandong neGuangdong, isu tine 30, 000 mativi emamirimita akangwara ekugadzira guruva isina musangano, ine otomatiki robhoti otomatiki kurongedza chiputira chigadzirwa uye otomatiki marara kupora uye marara system. mbishi yekuongorora uye kuita kwekuyedza murabhoritari, muforoma dhizaini rabhoritari, isu takagadzira uye kuyedza ingangosvika chiuru chemakona ekugadzirisa maforoma semutungamiri mune ino indasitiri.
Allwin Pack inoshandisa mbishi zvinhu zvese zvinoenderana nemamiriro epasi rose ezvemamiriro ekunze, ese ndiwo giredhi rekudya. Isu takavaka kwenguva refu
kudyidzana nevatengi vanobva kuNorth America, Europe, Japan, Austuralia, Asia pamwe nendege, supamaketi, chikafu uye vagadziri vechikafu.
Allwin Pack yakasaina zvibvumirano zvekugara kwenguva refu nezvitoro zvikuru zvinoverengeka muUSA, kuvapa Zvizere / hafu saizi mapani nezvimwe, zvigadzirwa zvaAllwin Pack zvakakunda kuzivikanwa mumusika weNorth America nekuda kwemhando yepamusoro, Allwin Pack ine akarumbidzwa semutengesi wemhando yepamusoro.
Zvigadzirwa zveAllwin Pack zvinosanganisira aruminiyamu mafirita emidziyo, mudziyo wepurasitiki, chivharo chepurasitiki, mafiripi epamba, Inter-yakapetwa pepa pepa, mahwendefa egrill, kuvhara-kupisa uye kubvisa mudziyo nezvimwe, huwandu hwezvinhu zvinopfuura mazana manomwe.
Allwin Pack inodzora chigadzirwa chemhando yepamusoro uye inoteedzera iyo yese nzira yekugadzira nekuda kwehunyanzvi hwetekinoroji uye masevhisi emhando yepamusoro, ine eco-hushamwari, hutano uye chengetedzo pfungwa, isu tinotarisira kugadzira yakanakisa inoraswa midziyo yekumisikidza bhizinesi ine mhando dzakanaka zvigadzirwa uye nekukurumidza kutumira.